.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် ပုံလှလှလေးများ (၂)
Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် ပုံလှလှလေးများ (၂)
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် photoshopနဲ့ နောက်ခံ background ဖယ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီပုံလေးတွေက flashsongဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
အားလုံပေါင်းပုံ၂၅ပုံရှိပါတယ်။ လိုချင်ရင်အောက်ကလင့်မှာလင့်တွေကို right click >>> save link as နှိပ်ပြီးဒေါင်းသွားနိူ်င်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်ခါထဲဒေါင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာ လေးမှာဒေါင်းနည်းရေးထားတာရှိပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Download>>>Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် ပုံလှလှလေးများ (၂)
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်လေးကို ကူးယူမယ်ဆိုရင် ဒီဆိုဒ်ကို ပြန်လည် Credit ပေးကြပါရန်။ ကျေးဇူးအထူးပါ ။
Posted by FlashSongCrazy at 11:23